Axmed Madoobe oo shuruud ku xiray Xildhibaanada lagu soo dooranayo Gedo | Dhacdo
Axmed Madoobe oo shuruud ku xiray Xildhibaanada lagu soo dooranayo Gedo
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inaanan weli xal loo helin arrinta Gobolka Gedo, ee ku aadan in laga saaro Ciidamada Dowladda.
Madaxweynaha Jubbaland oo maanta furay Kaldhiga 3aad ee Baarlamaanka Jubbaland ayaa Xildhibaanada uga warbixiyay xaaladda guud ee Jubbaland, isagoona soo hadalqaaday arrinta Gobolka Gedo.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in arrinta Gobolka Gedo ay tahay waxa illaa iyo hadda uu xalkeeda raadinayo, isla-mrkaana uu albaabada u furay cid kasta arrintaasi ku lug leh, gaar ahaan Dowladda Federaalka.
Waxa uu intaa ku daray ka Jubbaland ahaan in ay diyaar u yihiin in xal laga gaari arrinta gobolkaasi, balse ay dhanka Dowladda Federaalka waxba ka soconeyn, sida uu yiri.
Dhanka kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa xusay in loo baahanyahay ka hor Doorashada Xildhibaanada Qaranka in xal laga gaaro arrinta Gedo.
Axmed Madoobe ayaa intaa ku daray, haddii aanay Dowladda Federaalka ciidamadeeda kala bixin Gobolka Gedo inaanay markaasi ka dhici karin Doorashada Xildhibaanada, qaybta loo qoondeeyay in lagu soo doorto Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Dowladda Somaliya ayaa ciidan fara-badan u daabushay qaar ka mid ah Degmooyinka Gobolka Gedo, ka dib doorashadii lagu murmay ee marka 2aad lagu soo doortay Axmed Madoobe, 22-kii bishii August ee sanadkii hore.